ဗေဒင်ဆိုင်ရာ စာစုများ . . .: October 2012
မွေးသက္ကရာဇ် - ၁၃၀၁ ခုနှစ်၊ ၀ါခေါင်လဆန်း (၆)ရက်၊ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်နေ့
ရုပ်သဏ္ဍာန် - အသားမဲ အရပ်ပု၍ ပြည့်ဝသောကိုယ်ရှိသည်
မေးသည့်နေ့ - ၁၃၃၄ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း (၆)ရက်၊ ကြာသပတေးဂြိုဟ်နေ့
နာမည်ပညတ် - ကိုအောင်သိန်း
မူလဇာတာနှင့် ဇာတာရှင်၏ ရုပ်လက္ခဏာတို့ကို စီစစ်ကြည့်လျှင် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်သည် (၀ရ) ဣဋ္ဌ လက်ျာဘွား ဖြစ်၏။ လူက အနိဋ္ဌအားသာနေသည်။ လက်ျာဘွားဖြစ်သော်လည်း သဒ္ဒနိကာယ် အသံတွင် ပျော့၍အေးသည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်ဓါတ်သည် လက်ဝဲသို့ ယိမ်းနေ၏။ ညှာတာတတ်ခြင်း၊ အားနာတတ်ခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်သည်းခံတတ်ခြင်း၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်း တို့ရှိမည်။ ဇာတာက လက်ျာ၊ စိတ်က လက်ဝဲစိတ်။
ဣဋ္ဌဘွား၊ အနိဋ္ဌရုပ်ကြောင့် ကံအကျိုးပေးသည် လွဲချော်မည်။ ခက်ခဲပင်ပန်းမည်။ စိတ်ဆန္ဒများ ပြည့်ဝအောင် အကျိုးပေးဘို့ အနှောင့်အယှက်များမည်။ ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းမည်။ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်သည် ၀ရတွင် ရှိသော်လည်း အင်အားမှာ ၄အားသာရှိ၍ အဘအကျိုး မခံစားရ။
လက်ျာဘွားသည် လက်ဝဲစိတ်နေစိတ်ထားရှိ၍ ဘ၀တာတွင် မိမိအား အနိုင်ကျင့်သူ ပေါများမည်။ ရိုသေလေးစားသူ မရှိတတ်။ သြဇာကင်းမဲ့၏။ အပေါင်းအသင်းကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာတတ်၏။ စီးပွားရေးတွင် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု များမည်။
နာမည်သည် ၁-၆ ဖြစ်သောကြောင့် ဣဋ္ဌမှ အနိဌသို့ မှည့်သော နာမည်ဖြစ်ခြင်း၊ တိုင်စဉ် ဇောက်ထိုး ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် အစတွင် ကောင်းသလိုလိုနှင့် အဆုံး၌ ပျက်ရခြင်း၊ ဘေးရန်များခြင်း၊ ထိခိုက်ခြင်းများကို တွေ့ကြုံရမည်။
ကြာသပတေးဂြိုဟ်သည် အား ၁၀-မပြည့်သော်လည်း ဇေယျဖြစ်သောကြောင့် ဥာဏ်ပညာ အမြော်အမြင်ရှိသည်။ ပညာရေးမူကား အဆုံးသတ်တွင် ခက်ခဲစွာရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။ (နာမည်သဘော အစကောင်း၍ အနှောင်းညံ့)
စီးပွားရေး အလုပ်အကိုင် အကြံအစည်တို့တွင် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်နှင့် တနင်္လာဂြိုဟ်တို့ကြောင့် ငွေရှင်ကြေးရှင် လူချမ်းသာတစ်ယောက် ဖြစ်မလာနိုင် (အချို့ မွေးရာပါ မိဘချမ်းသာသူများ ဖြစ်စေကာမူ မိမိကိုယ်တိုင် စီမံနိုင်ခြင်းမရှိ၍ မိမိ၏ ချမ်းသာမှုဟု မယူဆနိုင်) ဇာတာရှင်၏ စီးပွားရေးသည် ခိုင်မာစိတ်ချရသော စီးပွားရေးမဟုတ်။
အိမ်ထောင်ရေးတွင် သောကြာဂြိုဟ်သည် (မရဏ) ဂြိုဟ် ဖြစ်သော်လည်း အား (၁၂) ရှိသောကြောင့် သင်သည် ဇာတာတွင် မိန်းမဂြိုဟ် မယားဂြိုဟ် သောကြာဂြိုဟ် လက်ျာတွင်ရှိ၍ ဇာတာရှင်ကို နိုင်သော ထက်မြက်သည့် မိန်းမမျိုးကိုရလျှင် ခိုင်မြဲမည်။ ပျော့ညံ့သော မိန်းမနှင့် ရလျှင် မမြဲချေ။
မေးသည့်ကာလတွင် ရောက်ရှိနေသော ဒသာမှာ တနင်္လာဂြိုဟ် သက်ရောက်မှ ကူးလာသော ဓါတ်ဖက် ကြာသပတေးဂြိုဟ်၏ ဒသာဖြစ်၏။ ၎င်းကြာသပတေးဂြိုဟ်သည် မူလက အထက်ဂြိုဟ်ဖြစ်၍ ကောဇာတွင် ဒွယ ထက်အောက် ကောင်းဆိုးညီမျှသော ဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။
ရောက်လာသောနေ့သည် ကြာသပတေးဂြိုဟ်နေ့ဖြစ်၍ ဒသာတိုင်တွင် တိက္ခနိစ်ဌာန၌ရှိနေ၏။ ကောဇာတိုင်တွင် ဒွယ ဌာနတွင်ရှိသည်။
ဆရာ၏ လက်ဝဲဘက်တွင် ထိုင်၍ ဒူးတဖက်ထောင် တစ်ဖက်လှဲ ထိုင်၍မေး၏။
အခြေအနေအရပ်ရပ်တို့ အပျက်အစီးများ၍ လက်ရှိအခြေအနေမှ ပြောင်းလဲရမည့်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ (ကြာသပတေးဂြိုဟ်ဒသာတွင် ၀ဲဘက်မှထိုင်၍ ဒူးတစ်ဘက်ထောင် တစ်ဖက်လှဲ ထိုင်၍လည်းကောင်း၊ ကြာသပတေးဂြိုဟ်နေ့သည် အပျက် တိက္ခနိစ်တွင် ရှိခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ အပျက်နှင့် အပြောင်းကို ဦးစားပေးဟောသည်။)
ဗေဒင်မေးရင်း ရည်ရွယ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ရာ၌ အပျက်များခြင်း၊ အထမမြောက်ခြင်း၊ မအောင်မြင်ခြင်းများကို ဟောရမည်။
ဂြိုဟ်စားတွင် ဂြိုဟ်သက် (၂၉)နှစ်မှ (၄၆)နှစ်အတွင်း ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် (လာဘ)ဂြိုဟ်စားခြင်း၊ ၎င်းဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်သည် မွေးနံ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်နှင့် ၁-၄ (အင်းဝ) (ဦးဝေ) ရန်များကျခြင်း၊ လက်ျာ ၀ရဘွားသည် လက်ဝဲ လာဘတွင် ကျခြင်းများကြောင့် ဇာတာရှင်သည် အသက် ၄၆ နှစ်တိုင်အောင်အတွင်း . . .
တနင်္လာဂြိုဟ် သက်ရှိပရိယာယ်၊ အင်္ဂါဂြိုဟ် သက်မဲ့ပရိယာယ်၊ သောကြာဂြိုဟ် သက်ရှိပရိယာယ်တို့ကို အကြောင်းပြု၍ (ဂြိုဟ်စားတိုင်အရ) ခြေ၂ချောင်း ထွက်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်ပျက်ခြင်း၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပစ္စည်းကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာခြင်းများကို ယူဆရမည်။
အသက် ၂၉ နှစ်မှ ၄၆ နှစ်အတွင်း ကောင်းသော လာဘ အထက်ဂြိုဟ် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်၏ ကာလအတွင်း ဖြစ်သောငြားလည်း ဇာတာရှင်အဘို့ အကောင်းမခံစားရပါ။ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုး ပေးဘို့သာ များလေသည်။)
အသက် ၃၃ နှစ်ပြည့်ပြီး ပဌမ ၄လ တနင်္လာဂြိုဟ်ဒသာကိုချန်၍ ယခုရောက်ဆဲ ဓါတ်ဒသာ ကြာသပတေးဂြိုဟ် ကာလအတွင်း ၎င်းဒသာတိုင်ကို မူတည်၍ နိမိတ်နှင့်တကွ ဟောပုံမှာ . . .
ဟောမည့် ပစ္စက္ခကာလ (ကြာသပတေးဂြိုဟ် ဓါတ်ဒသာ)သည် ဟောသည့်ကာလ ကောဇာတိုင်တွင် ဒွယဌာနမှာပင်ရှိ၍ အထက်တစ်ဝက် အောက်တစ်ဝက်ဂြိုဟ် ဖြစ်သောကြောင့် ကောင်းဆိုးဌာနအားလုံးမှ နိမိတ်များကို ပြနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် မေးသည့်နေ့ နိမိတ်ပျက်၊ အထိုင် (ထိုင်ပုံအနေအထား) အနိဋ္ဌတို့ကြောင့် အနိဋ္ဌအားသာ၍ အဆိုးနိမိတ်များကို ဦးစားပေး၍ ဟောရမည်။
ပြဌာနရှိ ၂-၅ ဂဗ္ဘေ သက်ရှိ။ အနီး တနင်္လာဂြိုဟ်(ကာရဏကာရက) မြေဂြိုဟ် ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကပ်ခြင်း၊ ယောက်ျားဂြိုဟ်၊ ဌာနပမာဏ၊ ၀ိပရိတ်ပြန်သော် သက်မဲ့၊ လေဂြိုဟ်၊ အဝေး၊ ကာလပမာဏ၊ ၎င်းသည် ဆိုးသောဌာနတွင် အကြောင်းနိမိတ်ဖြစ်သည်။
မန္ဒနိစ်ဌာနရှိ ၆-၂ သောက သက်မဲ့။ (သမ္ပဒါနကာရက) မြေဂြိုဟ် တနင်္လာဂြိုဟ်ကပ်ခြင်း၊ မိန်းမဂြိုဟ်၊ အနီး၊ အထက်ဂြိုဟ်ကပ်ခြင်း၊ ၀ိပရိတ်ပြန်သော် သက်ရှိ။ လေဂြိုဟ်၊ အဝေး၊ အောက်ဂြိုဟ် (တိရစ္ဆာန် အထီး) ၎င်းသည် ဆိုးသော မန္ဒနိစ်ဌာနတွင် အကြောင်းနိမိတ် ဖြစ်သည်။
တိက္ခနိစ်ဌာနရှိ (၅-၁) ပအောင် သက်ရှိ (ကမ္မကာရက) မီးဂြိုဟ် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ကပ်၊ ယောက်ျား၊ အဝေး၊ အောက်ဂြိုဟ်ကပ်ခြင်း၊ ဌာနပမာဏ၊ ၀ိပရိတ်ပြန်သော် သက်မဲ့၊ ရေဂြိုဟ်၊ အနီး၊ အထက်ဂြိုဟ်၊ ကာလပမာဏ၊ ၎င်းသည် ဆိုးသော တိက္ခနိစ်ဌာနတွင် အကြောင်းနိမိတ်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါတို့မှ ဦးစွာဟောပြောအပ်သော အကြောင်းအရာကို ရွေးချယ်လျှင် တနင်္လာဂြိုဟ်၏ အဖြစ်အပျက်၊ ကြာသပတေးဂြိုဟ်၏ အဖြစ်အပျက်၊ သောကြာဂြိုဟ်၏ အဖြစ်အပျက်များသာ ဖြစ်သည်။ (မေးသောနေ့ အပျက်နှင့် အထိုင်ပျက်)
ထို့ကြောင့် ဇာတာရှင်သည် ဝေးသောအရပ် (၀ါ) တစ်ခြားအရပ်ဒေသမှ ချေးယူထားသော ငွေ အကြွေးကို ပြန်လည်မဆက်နိုင်ခြင်း၊ ငွေပူ ငွေမှုများပေါ်ခြင်း ဟူသော အကြောင်းနိမိတ်ကို တွေ့ကြုံရပြီးနောက် (တနင်္လာဂြိုဟ် ၀ိပရိတ်ပြန်ထားသည်) အလုပ်တူ၊ ဌာနတူ (အနီး၊ ကာရဏကာရကသဘော) ရာထူးအလတ်စား အရာရှိ (ဒွယကြာသပတေးဂြိုဟ် ကပ်ခြင်းသဘော) ယောက်ျားတစ်ဦး (အမည်တပ်လိုပါက ကပ်ဂြိုဟ်တိုင်ကိုကြည့်) (ကပ်ဂြိုဟ်တိုင်တွင် တနင်္လာဂြိုဟ်ကို သောကြာဂြိုဟ် ပြန်၍ ကပ်နေသည်။) ကျော်သိန်း၊ သိန်းကျော် (ကသ) (သက) စသည်နှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီး အလုပ်မှ ပြောင်းရန်ပေါ်ပေါက်ခြင်း၊ ပြောင်းလိုခြင်းများသည် အကျိုးတရားအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာမည် ဖြစ်သည်။ ဇာတာရှင်သည် အရေးနိမ့်နေသည် (အကြောင်းမှာ မေးသည့်နေ့ နိမိတ်ဂြိုဟ်သည် အပျက်အားသာလျှက် ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။)
ပျက်ဌာနဖြစ်သည့် ကြာသပတေးဂြိုဟ် အကြောင်း၊ သောကြာဂြိုဟ် အကြောင်းများတွင် ဧကန် အဆိုး (၆မတ်ဆိုးသည့် ကြာသပတေးဂြိုဟ် အကြောင်းကို ဟောသောအခါ) မိုးကာ (၀ိပရိတ်ပြန်ထားသည်များကိုကြည့်ပါ) (သက်မဲ့၊ ရေဂြိုဟ်၊ အနီး၊ အထက်ဂြိုဟ်၊ ကာလပမာဏ) ထို့ကြောင့် မိုးကာအင်္ကျီ (ပျက်သောဌာနချင်းလည်း တွဲစပ်အမည်ဖော်ထားသည်) ပျောက်သွားခြင်း၊ အခိုးခံရခြင်း စသော အကြောင်းနိမိတ်ကို ကြုံတွေ့ရပြီးနောက် ဇာတာရှင်သည် အောက်ပိုင်း ပေါင်ခြံတွင်၊ ပေါင်တွင် မီးပူလောင်ခြင်း၊ အပူလောင်ခြင်း စသော အနာတရ ဖြစ်မည်။ (မိမိနေအိမ်တါင် မဟုတ်ဘဲ အိမ်အပြင်ပတွင် ထိုင်နေစဉ်၊ နားနေစဉ် ဖြစ်မည်။)
အောက်ဂြိုဟ်ကပ်၍ သက်ရှိဖြစ်သောကြောင့် ဇာတာရှင်၏ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်း၊ ပေါင်တွင် မီးဂြိုဟ်ကပ်၍ ပျက်ခြင်းကို ထောက်၍ အပူလောင်ခြင်း၊ အဝေးရဖြစ်၍ တခြားအိမ်တွင် ဖြစ်ခြင်း၊ ဌာနပမာဏ ဖြစ်၍ သွားလာနေစဉ် မဟုတ်ဘဲ ထိုင်နေစဉ် နားနေစဉ် ဖြစ်ရခြင်း၊ ကမ္မကာရကဖြစ်၍ အလုပ်နှင့် စပ်ဆိုင်သော မီးအပူဒဏ်ဖြစ်ခြင်းတို့ကို ဟောလေသည်။
အမည်တပ်လိုသော် ပရတိုင်ခေါ် ကပ်ဂြိုဟ်တိုင်ကိုကြည့်လျှင် ၎င်းကြာသပတေးဂြိုဟ်ကို ပြဌာနတွင် တနင်္လာဂြိုဟ် ကပ်လျှက်ရှိ၍ ၅-၂ သက်မဲ့ ဖြစ်သောကြောင့် မီးခွက်ဖြစ်ခြင်း၊ မတော်တဆ အလိုအလျောက် မီးခွက်နှင့် တိုက်မိပြီး ပေါင်တွင် မီးပူလောင် ဒါဏ်ရာရခြင်းကို ယူဆဟောပြောနိုင်၏။
မန္ဒနိစ်ဌာနရှိ သောကြာဂြိုဟ် အပျက်ကို ဆက်လက်ဟောပြောရန်မှာ အတောင်ပေါက်သတ္တ၀ါ (သိန်းငှက်) စသည် အဝေးရပ်မှလာပြီး ဇာတာရှင်နေအိမ်၊ ခြံမြေစသည်တို့တွင် ထိခိုက်သေဆုံးသွားခြင်း၊ ဒဏ်ရာရသွားခြင်း၊ အပြစ်တင်ခံရခြင်း နိမိတ်ကို ဇာတာရှင်ကိုယ်တိုင် စိတ်မချမ်းမြေ့ဘွယ် မျက်မြင်လက်တွေ့ ကြုံရပါက . . .
ဇာတာရှင်နှင့် ၂ဦးစပ် ပိုင်ဆိုင်သည့် သစ်ပင်၊ သွပ် (စသည်လည်း ယူဆနိုင်သည်) ရောင်းချလိုက်ရခြင်း၊ (သောကြာဂြိုဟ် ဆိုးကောင်းအားမျှတခြင်းသဘော) ဖြင့် ထွက်သွားမည်။ (ငွေကြေးကျပ်တည်း၍ ရောင်းလိုက်ရမည်။)
အမည်တပ်လိုသော် . . . ပရတိုင် ခေါ် ကပ်ဂြိုဟ်တိုင်ကိုကြည့်လျှင် ၎င်းသောကြာဂြိုဟ် သည် တိုင်ထိပ်တွင် ကောဇာ ဇေယျ အင်္ဂါဂြိုဟ်ကပ်၍ ၆-၃ သားဆွေ သက်ရှိ၊ မိတ်ပျက်ရန်၊ အဝေးရပ်၊ ကမ္မကာရဏ တို့ကိုထောက်၍ အလုပ်အကိုင် အထူးတိုးတက်ကြီးပွားနေသော နောက်ဖေးဘက်က တစ်အိမ်ကျော်လမ်းမှ (အဟောတိုင်တွင် မွေးနံမှ တန်းအောက်ပိုင်းကျ၍ တစ်လုံးကျော် သောကြာဂြိုဟ် ရှိသောကြောင့်) ဦးစိုးသိန်း၊ ဦးသန်းဆွေ (၃၆-၆၃) စသူက ၎င်း၏ အလုပ်တွင် အသုံးပြုရန် ၀ယ်သွားခြင်း ဖြစ်မည်။
ဇာတာရှင်က သိလို၍ မေးလာသော၊ စုံစမ်းလာသော အချက်များကို ကိန်းသဘောနှင့် မေးနေ့ အထိုင်များကိုကြည့်၍ ဟောပြောနိုင်ပါသည်။ အကြံပေးနိုင်သည်။ ဧကန်ဟု မဟောပြောနိုင်ပါ။
ဥပမာ ။ ။ ကျွန်တော် အိမ်ခန်းတစ်ခန်း ငှားချင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါ့မလား။
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်သည် ကောဇာကပ်ဂြိုဟ်ကြောင့် ကောင်းအားဆိုးအား မျှနေသော်လည်း အပျက်နိမိတ်များကို ထောက်၍ ယခုကာလ မရနိုင်သေးပါ။ အဆင်မပြေသေးပါဟု ဟောရမည်။ ရလျှင် အနစ်နာခံပြီးမှရမည်။
ကောင်းသောဌာန ကောင်းသော သောကြာဂြိုဟ် ကပ်သည့် အင်္ဂါဂြိုဟ် အကြောင်းမေးလာလျှင်လည်း (အကြံအစည်သာရှိသည်။ အထမမြောက်သေး) ဟူ၍ ဖြေရမည်။
ဆိုးဌာနနှင့် စပ်ဆိုင်သမျှ အမေးများရှိလျှင်မူကား ဧကန်အဆိုးဟုသာ ဟောရပါမည်။ အထမမြောက်ခြင်း၊ အထမြောက်လျှင် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးခြင်းများကို ဟောရပါမည်။ ကိန်းသည် သဘာဝနိယာမ ဓါတ်များဖြစ်၍ ယတြာပြုခြင်း၊ ဆန်းဝင်ဆန်းကျင်မှုကြောင့် အကောင်းအဆိုးဖြစ်ခြင်းများကို ဟောပြောရခြင်း နိမိတ်သည် အတပ်အသေစွဲ၍ ဟောရခြင်းများသည် ဆန်းဗေဒင်ပညာ၏ အဓိက သော့ချက်ကြီး ဖြစ်ပေသည်။
ဆရာမင်းကျော်ဇော်၏ သစ္စာခံဆန်းကျမ်းဗေဒင်ပညာသင်တန်းမူ ပြီးပါပြီ . . .
Posted by aha at 8:38 AM0comments
Posted by aha at 2:38 AM0comments